Imithi ubhekana bephethwe izifo ezihlukahlukene umgudu wokuphefumula e abadala kanye nezingane - amaphilisi noma isixazululo "Erdomed". Indlela ukuthatha izindlela, kulotshiwe kufolda ukubizwa ngokuthi bhukwana imfundo. "Erdomed" - umuthi itholakala tinhlobo letehlukene temisho, ngakho namuhla thina ezichaza: nini futhi kanjani ukuze kahle ukusebenzisa amaphilisi noma izixazululo le mithi, ukwazi umbono wabantu ngaye, uma unazo analogue.
Umuthi kuyinto expectorant mucolytic.
Umuthi kuboniswa ukwehlisa isikhwehlela viscosity futhi sithuthukise osenyameni yayo ye izifo elandelayo:
Acute ukucinana kwemigudu yokuphefumula laringofaringit.
ukwelashwa Kuhlanganiswe ne -ejenti elwa namagciwane.
Medicine "Erdomed" isetjenziswa kulezi amafomu:
Granules for ukumiswa.
Iphakethe (sachet) nokuqukethwe - elimbudumbudu elincane imithi "Erdomed".
Tablets kungukuthi ikhishwe.
Incazelo amafomu Isikali
Granules ngoba slurry ngobuningi kukhona Clumps ezincane ezimhlophe ne ukunambitheka orange.
Amaphilisi Abonayo nale izidakamizwa - kanzima igobolondo gelatin nge okuqukethwe nombala omhlophe kokuba umzimba ophuzi kanye isivalo babe luhlaza.
Powder imithi kuchaziwe izikhwama - kulula ngokuhambisa I ochotshoziwe izidakamizwa granulated umbala omhlophe nge ngephunga lemon.
Sakhiwo igobolondo kanzima gelatin izidakamizwa "Erdomed": 300 mg isithako esisebenzayo, okuthiwa erdosteine, microcrystalline cellulose, povidone, magnesium stearate, kanye izingxenye ezengeziwe: gelatin, ama-titanium dioxide, yensimbi oxide ophuzi, indigo carmine. isamba okunjalo zomuthi eziqukethwe eyodwa capsule.
Amagobolondolo 10 nokuqukethwe Isikali ibhamuza, futhi iphakethe kungenzeka 1 noma 2 of plate.
Ukubunjwa elimbudumbudu for ukumiswa
Erodostein izidakamizwa esebenzayo kulokhu yezingxenye ezengeziwe elimbudumbudu 7 kuphela, zihlanganisa: sucrose, i-sodium benzoate, aspartame, saccharin sodium, sodium carboxymethyl isitashi, isithokela orange.
Yathela ivolumu ithuluzi izitsha eziyisikhombisa 100 noma 200 ml. ukulungiselela Ezimisele embizeni ingilazi nge brown aluminium isivalo nge Ukuvikelwa. Iphakheji amakhadibhodi iqukethe 1 isitsha, okuyinto sihlanganisa inkomishi wokulinganisa.
Ukubunjwa elimbudumbudu isixazululo ukulungiselela
Kulokhu, isithako esebenzayo kuyinto 225 mg kanye nezinye izingxenye izidakamizwa ezilandelayo: sucrose, i-sodium benzoate, aspartame, sodium carboxymethyl isitashi, lemon isithokela. elimbudumbudu Ikhishwe ngo sachets ka 4.425 mg. Babephethe amakhadibhodi iqukethe 10 noma 20 izikhwama ne izidakamizwa.
Izidakamizwa "Erdomed" udle. Ukwabiwa isikimu abadala simiswe ngalendlela lelandzelako:
Amaphilisi - 1 Isikali igobolondo (300 mg) kwaba izikhathi ezingu-2 noma 3 ngosuku.
Ngesimo elimbudumbudu for ukumiswa - Isikali ngamunye esisindo: kg isisindo 10 mg / 1 umzimba kabili ngelanga. Okusho ukuthi, uma, isibonelo, umuntu enesisindo kg 60, bekuyoba kudingeka baphuze 600 mg ngelanga kuyinto mg 300 kabili ngosuku.
Powder for isixazululo - 1 sachet (225 mg) kwaba izikhathi ezingu-2 noma 3 ngosuku.
Ukuze izinsana nabantwana ifomu Kunconywa ukukhululwa "Erdomed" imiyalelo ukulungiselela okufanele ngempela zifakwe iphakethe eyisibonelo ukumiswa luyimbudumbudu. Isimiso Isikali inikezwa esekelwe esisindo wengane, kanye yobudala bakhe. + Ngakho-ke, lokhu izidakamizwa okufanele zithathwe ukuze izingane:
Kusukela 3 kuya ku-6 ubudala (esisindo 15-20 kg) - 2.5 ML kabili ngosuku.
Kusukela 7 kuya kwengu-12 (esisindo 21-30 kg) - 5 ml, izikhathi 2 ngosuku.
abaneminyaka engaphezu kuka-12 (ngaphezu kuka-30 kg) - 5 ml 3 izikhathi ngosuku.
Ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa, kumelwe ulungiselele lesi sidakamizwa "Erdomed" ngendlela efanele. Imiyalelo emuthini lichaza ngokucacile ukuthi ungawukhipha kanjani ukuba alulaze kusho. Ngakho, elimbudumbudu for ukumiswa kufanele igcwaliswe ngamanzi nahlanza (uketshezi zimisele ngqo ngaphakathi isitsha) ukuze uphawu olukhethekile ngebhange uqobo. Khona-ke udinga shake elikuqukethe, kuze ukumiswa eyohlobo. Ngemva kwalokho kufanele uhlole izinga imithi egabheni, futhi uma kudingekile, engeza ukuba amanzi uhlanganise futhi. Slurry eqeda kumele kusetshenziswe ezinsukwini ezingu-10, kuncike isitoreji yayo esiqandisini ezingeni lokushisa 4-8 degrees. Futhi qiniseka ngaphambi ukusetshenziswa kwezidakamizwa ne okuqukethwe ngamunye ayonyakaziswa.
Uma umuntu usezuze izidakamizwa ngesimo granules, ibekwe esikhwameni, lapha kukhona imiyalelo ezithé ukwehluka lapho esetshenziswa. "Erdomed" - ukulungiselela ekubhekaneni izifo ezihlukahlukene ipheshana zokuphefumula, kulesi simo uzilungiselele kanje: sachet idabukile, okuqukethwe batheleka ingilazi, okumele ukungezwa 200 ml amanzi noma ikhofi. Bese udinga ukuthi uphuze umuthi.
Ngingakujabulela yini nabancelisayo?
izifundo Preclinical wembula ayinayo imiphumela anobuthi imithi emzimbeni womuntu. Kodwa nakho yokusetshenziswa kwawo ngenkathi bekhulelwe nangenkathi bencelisa lilinganiselwe. Ngakho-ke, i-aphoyintimenti kusho "Erdomed" ngesikhathi lactation, kanye 1 yokuthathu okuthola owesifazane isikhundla ezithakazelisayo kungenzeka uma inzuzo unina bulingana ingozi embungwini noma usana. Ngokuvamile, awunankinga esikhundleni the izidakamizwa Analogue akuyona, ikakhulukazi kusukela imithi efanayo for isinyathelo yavama. Ngakho-ke kungcono hhayi ukuba izame impilo bese ukhetha udokotela ngezinye izindlela ezifanele, singasebenza kulesi sigaba sabantu.
Kwezokwelapha "Erdomed" nozakwabo khona, eziningi zazo. Nokho, izindlela ethandwa kakhulu ngawo ungakwazi ukushintsha imithi yilezi: "Ambrobene", "ambrogeksal", "Atsestin", "Bromhexine", "Mukoneks", "Bronhostop", "Ambroxol", "Flavomed", "Lasolvan".
Izidakamizwa "Erdomed", intengo esesikhundleni Pharmacy ayo ezahlukene, ithengiswe ngesilinganiso ruble 500-600 capsule ngamunye inani izingcezu 20. Izindleko imithi ezinye izinhlobo ukukhiqizwa is tentatively elise intengo kuhlobo olufanayo. Kwabanye abantu, le ntengo kungase kubonakale okusezingeni eliphezulu ngokwanele ekhubazekile. Kulokhu, kuba njalo kungenzeka ukuthola analogue zomuthi. Ngokwesibonelo, izidakamizwa azizimbi ngokwedlulele "Flavomed" ogama value ruble 250, noma okunye amaphilisi "Mucosolvan" (ruble 200). Nokho, engabizi kule izidakamizwa kakhulu buyisidakamizwa "Ambroxol", okuyinto Analogue Russian kusho "Erdomed". Intengo yale esikhundleni ezishibhile kuphela $ 100 amaphilisi 20.
Lapho ukusetshenziswa engenangqondo therapy antitussive ungakheka ekuqongeleleni liquid uketshezi kule bronchi kanye nesanda bronchospasm.
Ukusebenzisa izidakamizwa akuphazamisi ikhono nokushayela imoto, futhi enze umsebenzi okudinga ukunakekela.
"Erdomed" imithi, okuyinto analogue angathengwa ngasiphi esitolo izidakamizwa, le nkulumo ayinankinga ngokwanele kusho ukuthi izimbangela eziningi ukuphelisa ituthuko engakalungi. Nokho, ezimweni ezingavamile, kungase kudingeke yesikhashana side effects:
On the ingxenye pheshana emathunjini - isicanucanu, isilungulela, uhudo.
komzimba - ukulunywa, isifuba.
Ekuqaleni ukwelashwa umuntu ungalahlekelwa ukunambitheka ukuzwela.
Uma izimpawu kungukuthi encishisiwe zingakapheli izinsuku 5 kusukela ekuqaleni ukuphuza umuthi, noma uma isiguli siya siba sibi kakhulu, kufanele afune usizo ngokushesha yezokwelapha iseluleko mayelana nokuthi ukwelashwa okwengeziwe.
kubika "Erdomed" lutho Cases yokudlula inani ukuthatha imithi. Kodwa uma lokhu kwenzeka umuntu (isib, ingane Isigwinya capsule ngengozi), khona-ke kulesi simo kubalulekile ukuchitha yokwelapha lingaze: ntombazane ukuhlanza, lavage esiswini, namalahle isebenze, noma ukuthatha izidakamizwa "Enterosgel". Futhi okubaluleke - ukwazisa udokotela futhi wayimemela ekhaya, udokotela uhlolwa isimo lesiguli kanye wanikeza izincomo okunye ukwelashwa.
"Erdomed 'imithi Izibuyekezo iziguli ugxile omuhle. Umuthi uye wafakazela ngokuphawulekayo phakathi iziguli abanezifo umgudu wokuphefumula. Futhi zonke sibonga yokuthi umuthi ngempumelelo ngempela, futhi ingozi nemiphumela engathandeki yalawo maphilisi incane.
Abantu bathi lokhu ithuluzi kusiza isikhwehlela basebenzile, ukukhwehlela ngesikhatsi ukwelashwa nge leli thuluzi ngokushesha. Nokho, umbono iziguli, lokhu izidakamizwa, kukhona eyodwa ethile - kuba wentengo. Umuthi ufaniswa ontanga yayo kuyabiza ngempela. Nokho, umphumela izidakamizwa ufaneleke amanani ayo. Ngakho-ke, musa skimp empilweni yakho, futhi isikhathi esingcono ukuthenga amaphilisi "Erdomed" ukuphathwa ngayo ukugwema okuvela ngenxa yezinkinga ukuwohloka. Futhi qiniseka ngaphambi kokuthenga ukuthi izimali okufanele ukuya kudokotela ku osledovanie ukuze kutholwe isifo futhi ulandele imiyalelo yakhe mayelana okunye ukwelashwa.
Kwezinye izimo, odokotela iyakwenqabela futhi akunikeze imithi ukuze Erdomed zeziguli zabo ". Umhlahlandlela ukulungiselela lithi kwalezi zimo ezilandelayo abakwazi ukuqhuba yokwelapha uyalisebenzisa yini leli thuluzi:
Lapho umuntu nokungabekezelelani hypersensitivity i umzimba ukuba izingxenye izidakamizwa.
Ngo isibindi womuntu.
Ngo esingamahlalakhona kwezinso.
Abesifazane ku-1 yokuthathu, yokukhulelwa.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-2 ubudala.
izimo Storage. Izwe ukukhiqizwa
Sekuyisikhathi ufunde indlela ukugcina imithi "Erdomed". Imiyalelo emuthini uthi lokho kusho ukuthi kudingeka agcine ngaso lokushisa 20 kuya 25, kude nezingane, endaweni emnyama. Izinsuku ukonga izidakamizwa ohlotsheni wokukhulula izidakamizwa futhi yilena elandelayo:
iminyaka engu-3 - I-zithutha.
iminyaka 5 - I-amaphilisi.
Iphuzu elibaluleke kakhulu: ukulondoloza slurry okuphekwe, njengoba kushiwo ngenhla, akudingeki izinsuku ezingaphezu kwezingu-10, ngemva kwalokho izimali kufanele kube ukuqeda. Gcina isixazululo kufanele kufakwe esiqandisini ngaphambi kokusetshenziswa futhi okuqukethwe izimbiza imithi kudingeka ayonyakaziswa.
Izwe Lokudabuka zomuthi - eCzech Republic.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi lapho izimo udokotela akunikeze imithi "Erdomed". Kwatholakala ukuthi lolu izidakamizwa eziningi abantu beza, kodwa ngentengo yalo, uma iqhathaniswa nezinye izidakamizwa ezifanayo liphezulu kakhulu. Sithole izimo lapho ukuphathwa is contraindicated kulesi sikhungo, kanye ukuthola mayelana imiphumela engemihle engase ibe ukwelashwa nale imithi.
Sebebonke ukulungiselela multivitamin 'Combilipen'. Yokusetshenziswa.